Maitiro Ekukurumidza Kuwedzeredza iyo iOS App Store | IPhone nhau
Maitiro Ekurumidze Zorodza iyo iOS App Store
Haisi iyo yakajairika, asi zvinoitika kazhinji kuti masevhisi eApple (kana chero imwe chikuva) iri kusangana nedambudziko. Kana chimwe chinhu chikatadza muICloud, izvo zvatinowanzoita zviri padyo nekuvhura iyo application isiri kupindura kanoverengeka kuti tione kana izvi zvikagadzirisa dambudziko, chimwe chinhu chatinomboita, asi icho chinhu chisina basa mune mamwe maficha. Ndiwo mamiriro eApp Store, iko kunyorera kune hunyengeri hunotibvumidza kuti tizorizorodze kubva mukati mekushandisa. Pano tinotsanangura maitiro ekukurumidza kuzorodza iyo App Store kubva kuIOS pasina kuivhara kubva kune multitasking.
Zvine musoro, chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuita vhura iyo App Store pane yedu iPhone, iPod Kubata kana iPad. Kana iwe uchiziva kuti iwe unofanirwa kuizorodza, zvinofungidzirwa kuti iwe watotora danho iri.
Chinhu chinotevera chatinofanirwa kuita kuenda kune iyo tebhu iri kutipa matambudziko.
Kamwe mune iyo tebhu, tinobata chiratidzo chako nekukurumidza kakawanda. Dzinenge gumi nguva inowanzo shanda.
Mashiripiti! Munguva pfupi, tichaona kuti App Store inozorodza sei.
Ichi ndicho chinhu chinogona kuuya chinobatsira, semuenzaniso, kutarisa kuti iko kushanda kwevhiki. Dzimwe nguva, pazuva nenguva iyo Apple inowanzoisa chishandiso chitsva chekusimudzira kwevhiki, hazviratidzike nekuti App Store haina kuzorodzwa, chimwe chinhu chinoonekwa zvakanyanya mu iPhone 6s, iyo iPad Air 2 uye iyo iPad Pro , zvishandiso zvine 2 uye 4GB ye RAM. Izvo zvakare zvichave zvinobatsira kana iyo App Store yave pasi, izvo zvinotidzivirira kubva pakudzvanya bhatani repamba kaviri, kutsvedza kumusoro kwemenu yekushandisa uye kubata iyo App Store icon zvakare. Iwe unofungei nezve ichi chidiki diki?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro Ekurumidze Zorodza iyo iOS App Store
Iyi hunyengeri haishande kwandiri chero kudimbura kubva kustoresto uye kubatanidza ... Chimwe chinhu chandingaite ndave vhiki ndisina kukwanisa kurodha chero chinhu ios9.3.3 iphone 6s
Apple muna 2015: zvigadzirwa zvitsva, zvakafanana zvekare manzwiro
Goredzva Rakanaka 2016!